Nepali Christian Bible Study Resources - आत्माको फल (भाग १)
» अध्ययन मालाहरू » पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य » ७ आत्माको फल (भाग १)
यूहन्ना १५:२,८,१६ फ______	यूहन्ना १५:४,५,६,७ रहनु
गलाती ५:१६ लाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। यो पदले दुईमध्ये कुनै एक अवस्थालाई वर्णन गर्दछ। तपाईं कि त आत्मामा हिँडिरहनुभएको छ (आत्माको फल देखाउँदै) अथवा तपाईं शरीरको अभिलाषा पूरा गर्दैहुनुहुन्छ (शरीरका कामहरू देखाउँदै)। दुईमध्ये कुनै एक। विश्वासीको हृदयभित्र युद्ध चलिरहेको हुन्छ (गलाती ५:१७ पढ्नुहोस्)। यो युद्ध आधिपत्यताको युद्ध हो। तपाईं कि त आत्माद्वारा नियन्त्रण गरिनुहुन्छ कि शरीरद्वारा? तपाईंले के शरीरले आफ्नो फल फलाउनेछ कि परमेश्वरले? अर्को दुईमध्ये कुनै एक अवस्थालाई गलाती २:२० मा उल्लेख गरिएको छ — “म होइन, तर ख्रीष्ट...” यदि यो स्व-जीवन हो भने, यो ख्रीष्ट-जीवन हुन सक्दैन; यदि यो ख्रीष्ट-जीवन हो भने, यो स्व-जीवन हुन सक्दैन। यी दुई पूर्ण रूपमा अमिल्दो कुराहरू हुन्।
« आत्माको बप्तिस्मा
आत्माको फल र विश्वासीको निम्ति परमेश्वरको उद्देश्य »